Lobbyist - Inkcazo kwizopolitiko
Indima yokuLobbyinge kwizopolitiko zaseMerika
Inendima yama-lobbyists inengxabano kwizopolitiko zaseMerika. Enyanisweni, xa uMongameli uBarack Obama ethatha i-ofisi ngo-2009, wathembisa abavoti ukuba akaze adibana okanye aqeshe ama-lobbyists kwi-White House. Ngoko yintoni eyenziwa ngumenzi-lobbyist okwenza ukuba angathandeki phakathi koluntu?
Ababhanksi baqeshwe kwaye bahlawulwa ngamacandelo anomdla okhethekileyo, iinkampani, ezingenzi-nzuzo kunye nezithili zesikolo ukuba zibe nefuthe phezu kwamagosa akhethiweyo kuwo onke amanqanaba karhulumente.
AmaLobbyist asebenza kwinqanaba lezemfundo ngokudibana namalungu eCongress ukuzisa imithetho kwaye bakhuthaze ukuba bavote iindlela ezithile ezixhamla abathengi babo. Kodwa nabo basebenza kumanqanaba ommandla nakwaseburhulumenteni.
Yintoni eyenza i-lobbyist yenza oko kungamthandi? Ihla imali. Abaninzi baseMelika abanalo imali yokuchitha ukuzama ukuphazamisa amalungu abo eNkongolo, ngoko bajonga iimfuno ezikhethekileyo kunye ne-lobbyists zabo njengenzuzo engalunganga ekudaleni umgaqo-nkqubo owanceda kubo kunokuba bahle kubantu.
I-lobbyists, nangona kunjalo, bathi bafuna ukuqinisekisa ukuba abaphathi bakho abakhethiweyo "bakuva baze baqonde iingcamango zombini ngaphambi kokuba benze isigqibo," njengokuba iqumrhu elithembekileyo libeka.
Kukho ama-lobbyists angama-9 500 ababhalisiweyo kwizinga lezemfundo. Oko kuthetha ukuba kukho i-lobbyists engama-18 kuwo onke amalungu eNdlu yeeNgameli kunye neSenate yase-US .
Baye bachitha imali engaphezulu kwe-3 billion yezigidi zamabhunga eCongress minyaka yonke, ngokutsho kweZiko lezoPolitiki ezithintekayo eWashington, DC
Ngubani Ongaba YiLobbyist?
Kumgangatho wesigqeba, uMthetho we-Lobbying Disclosure Act ka-1995 uchaza ukuba ngubani na ongekho lobbyist. Amazwe aneemiselo zawo kwi-lobbyists abangavumelekanga ukuba bafune ukuphazamisa inkqubo yowiso-mthetho kwii-legislature zabo.
Kwinqanaba lezemfundo, i-lobbyist ichazwa ngumthetho njengomntu ofumana imali engama-3,000 ngaphezu kweenyanga ezintathu ukusuka kwimisebenzi yokubambelela, unxulumana nomntu omnye ofuna ukuphazamisa, kwaye uchitha ngaphezu kwe-20 ekhulwini lakhe lokungena kwelinye umxhasi ngaphezu kweenyanga ezintathu.
I-lobbyists ngumntu odibana nayo yonke into emithathu. Abagxeki bathi imithetho ye-federal ayigxininise ngokwaneleyo kwaye ibonisa ukuba abaninzi abawaziwayo ngaphambili babenza imisebenzi ye-lobbyists kodwa bengayilandelani imimiselo.
Ungayifaka njani iLobbyist?
Kwinqanaba lezemfundo, ama-lobbyist kunye nama-lobbying firms kufuneka abhalise kunye noNobhala we- Senate yase - US kunye noMabhalane weNdlu yaseMelika yabaBameli ngaphakathi kweentsuku ezingama-45 zokwenza uqhagamshelwano olusemthethweni nomongameli waseUnited States, umongameli we-Congress, ilungu leCongress okanye amanye amagosa aseburhulumenteni.
Uludwe lwababhalisi be-lobbyists lubhalisiwe yirekhodi kawonkewonke.
Ababambisicelo kufuneka baxelele imisebenzi yabo ezama ukunyanzelisa amagosa okanye ukuthintela isigqibo somgaqo-nkqubo kwi-federal level. Kufuneka baxelele imiba nomthetho bazama ukuphazamisa, phakathi kwezinye iinkcukacha zemisebenzi yabo.
Amagumbi amakhulu okuLobbying
Imibutho yezorhwebo kunye neminqweno ekhethekileyo ijwayele ukuqesha abo bakhenkethi.
Eminye yamaqela anentsholongwane e-American politics yilezo zimela i-US Chamber of Commerce, i-National Association of Realtors, i-American Association of Retired Persons, kunye ne- National Rifle Association .
Iingxowa kwiLobbying Law
UMthetho wokuLawulwa kweLobbying uye wagxekwa ngenxa yokuqulethelwa yintoni abanye abavakalelwa kukuba yiyona nto evumela ukuba abathile be-lobbyists baphephe ukubhalisa kunye norhulumente wephondo . Ngokukodwa, umzekelo, i-lobbyist engayisebenzeli egameni lomnye umxhasi ngaphezu kwe-20 ekhulwini yexesha lakhe ayifuni ukubhalisa okanye ukufayiliza iifayile. Akayi kuthathwa njenge-lobbyist phantsi komthetho.
I-American Bar Association icebise ukuphelisa umthetho othiwa ngu-20 weepesenti.
Ukubonakaliswa kwamaLobbyist kwiMidiya
Ababhishobhi bebeye bade bavezwe ngokungahambi kakuhle ngenxa yempembelelo yabo kubaphathi bomgaqo-nkqubo.
Ngomnyaka we-1869, iphephandaba lachaza iCapeitol lobbyist ngale ndlela: "Ukungena ngaphakathi nokuphuma kwinqanaba elide, elikhohlakeleyo, ukukhwela ngamacorrid, ukulandelela ubude balo obude ukusuka kwigumbi ukuya kwigumbi lekomiti, ekugqibeleni lilele lithele umgangatho weCongress-lo mbonakaliso oqhaqhaqhakazileyo, le nyoka enkulu, inyoka yesikhala. "
Umnumzane wase-US uSen. Robert C. Byrd waseWest Virginia uthe uchaze le ngxaki ngama-lobbyists kunye nomsebenzi ngokwawo.
"Amaqela anomdla okhethekileyo ahlala ephethe impembelelo eninzi ngokumalunga nokumela kwabo kubemi," kusho uByrd. "Olu hlobo lokubamba iqela, ngamanye amazwi, alona msebenzi olinganayo nolu hlobo." Umntu omnye, ivoti enye ayisebenzisiyo xa iqumrhu elikhulu labemi lingaphantsi kwamelwa kwiindibano zeCongress lifaniswa nezimali ezixhaswe ngemali, luququzelele kakhulu amaqela anomdla, nangona kunjalo iinjongo ezinokuthi zilungele ukuba zinjalo. "
Ngethuba le- 2012 umqhubi wongameli , ithemba leRiphablikhi kunye nesithethi saseNdlu entsha uNewt Gingrich wamangalelwa ngokunyanzelisa kodwa engabhalisi imisebenzi yakhe noorhulumente. UGingrich wathi akazange awele phantsi kwengcaciso yomthetho ye-lobbyist, nangona wayefuna ukusebenzisa ifuthe lakhe elikhulu kubaphathi bomgaqo-nkqubo.
U-lobbyist wangaphambili uJack Abramoff wathwesa ityala ngo-2006 kwiintlawulo zobuqhetseba be-imeyile, ukukhutshwa kwentlawulo kunye noqhelwano olusisigxina esabandakanya abantu abalishumi amabini, kubandakanywa neNkokheli ye-House Majority Tom DeLay.
UMongameli uBarack Obama wangena emlilweni ngenxa yokuthatha into ebonakala ngathi iyindlela ephikisanayo yabasebenzi bama-lobbyists.
Xa u-Obama ethatha isikhundla emva kokuwina ukhetho luka-2008, wamisela ukuvalwa ngokungekho mthethweni ngokuqesha abantu abasandul "Abantu abaninzi babona inani lemali esetyenziselwayo kunye neemfuno ezizodwa ezilawulayo kunye nabasebenzi bama-lobbyist abahlala benokufikelela, kwaye bathi, mhlawumbi andibaleki," kusho uB Obama kamva.
Sekunjalo, i-lobbyists zivakatye rhoqo kwi-White House ye-Obama. Kwaye baninzi ababenama-lobbyist abaye banikwa imisebenzi kulawulo luka-Obama. Ziquka i- Attorney General Eric Holder noLobhala wezoLimo uTil Vilsack .
Ngaba iiLobbyists Zikwenzayo na?
Umongameli wangaphambili uJohan F. Kennedy wachaza umsebenzi we-lobbyists ngokucacileyo, esithi "ngabachwepheshe beengcali abanokukwazi ukuhlola izifundo ezinzima kwaye ezinzima ngendlela ecacileyo, eqondakalayo."
"Ngenxa yokuba ukumelwa kwethu kwenkomfa kusekelwe kwimida yeendawo, i-lobbyists ezithetha ngezoqoqosho ezahlukeneyo, ezoqoqosho kunye nezinye izinto ezisebenzayo zelizwe zenza injongo encedo kwaye zithathe indima ebalulekileyo kwinkqubo yomthetho," kusho uKennedy.
Imfazwe YaseMerika: Imfazwe yeNtaba yaseKennes
Biography ka Harriet Martineau
Izinkolelo zeNkolo kunye neNtsholongwane kaBarack Obama